မြန်မာ Street Photography Page တွေရဲ့နောက်ကွယ်က ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးတွေရေးနေသူတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း – Featured Collectives
Featured, Featured Collectives, Flare, Interview, Street Photography, StreetPhoto_bw, StreetPhoto_Color, THT
FC ရဲ့ ဒုတိယမြောက်အင်တာဗျုးအတွက် စဉ်းစားတော့ နည်းနည်းလေးလည်း ထူးခြားအောင်၊ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ Street Photography ချီတက်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ ရှေ့ကိုထွက်မလာပဲ နောက်ကွယ်ကနေအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ကို ဆွဲထုတ်ချင်တာနဲ့ MMSP ကနေစပြီး FC အထိ အလုပ်ဘယ်လောက်များများ Street Photography နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေ အစဉ်တစိုက်ဘာသာပြန်ပေးခဲ့တဲ့သူ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း Street Photo တွေရိုက်နေတဲ့သူကို အင်တာဗျူးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
ကင်မရာကို gadget တစ်ခုအနေနဲ့ စိတ်ဝင်စားတာကတော့ ဖလင်ကင်မရာခေတ်ကတည်းကပါပဲ။ နောက်တော့ ဒီဂျစ်တယ် point and shoot လေးတစ်လုံးရလို့ ဟိုရိုက်ဒီရိုက်ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ နည်းနာတွေကိုမလေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ Portrait (မော်ဒယ်ရိုက်) လည်း စိတ်မဝင်စား landscape လည်း စိတ်မဝင်စားဘူး။ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာတွေက candid ဆန်ဆန်တွေပဲ။ အဲဒီကနေ ၂၀၁၂လောက်မှာ DSLR ကင်မရာဝယ်ဖို့ စလေ့လာရင်းက အင်တာနက်ကနေ street photography ကို ထိတွေ့ခဲ့ရာကနေ ငါရိုက်ချင်တာ ဒါမျိုးလို့ သိခဲ့ရပြီး mirrorless ကင်မရာတစ်လုံးဝယ်ဖြစ်ခဲ့သလို street လည်း သေသေချာချာ စရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Composition မှာ Henri Cartier-Bresson ၊ Nobuyoshi Araki ။ အဖြူအမည်းမှာ Daidō Moriyama ၊ Trent Parke ။ ကာလာမှာ Martin Parr တို့ကို သဘောကျတယ်။
၅) နောက်ပြီး ခင်ဗျားက Myanmar Street Photographers အတွက်ကော၊ အခု Featured Collectives အထိပါ Street Photography နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေ ဘာသာပြန်ခဲ့တယ်ကြားတယ်။ ဘယ်လိုကြောင့် လုပ်ဖြစ်လာတာလဲဗျ။
ကျနော် ဘာသာပြန် အလုပ်လေးတွေ လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Myanmar Street Photographers ၁နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ ကိုချစ်မင်းမောင် (co-founder) နဲ့ စတင် သိကျွမ်းခဲ့ပြီး street photography နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးတွေ ဘာသာပြန်ဖို့ တိုက်တွန်းရာက စခဲ့တာပါပဲ။ အဲဒီနောက် ကိုချစ်မင်းမောင် Featured Collectives ကို စတင်တော့လည်း ဆက်လက်ပြီး ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးတွေ ဆက်လုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။
၆) ခင်ဗျားက ဓါတ်ပုံလည်းရိုက်တယ်၊ ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးတွေလဲရေးတယ်ဆိုတော့ ခင်ဗျားဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ခင်ဗျားဆောင်းပါးတွေထဲကအတိုင်းရိုက်ဖြစ်လား။ ဆောင်းပါးတွေထဲကနည်းလမ်းတွေ အသုံးချဖြစ်လား။
အင်တာနက်မှာ street နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ လေ့လာတဲ့အခါ စာရေးသူတွေရဲ့ သဘောထားအမျိုးမျိုးကို သိခဲ့ရပြီး ကိုယ်လည်း သဘောကျတဲ့အချက်လေးတွေကို လက်တွေ့အသုံးချကြည့်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့အခါရှိသလို မလုပ်ဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်။
Hanoi, Vietnam, 2016.
၇) ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ဖို့ ဘယ်လောက်အထိပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပါသလဲ။ အဆင့်ဆင့်တိုင်းကို ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်သလား။ ဒါမှမဟုတ် သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်သလိုကြုံလာတဲ့အတိုင်းရိုက်ပါသလား။
Street ရိုက်ဖို့အတွက် ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ ရုံးပိတ်ရက်မှာ အပျင်းမကြီးဘဲ အပြင်ထွက်နိုင်ဖို့ကို ကြိုးစားရပါတယ်။ နောက် ဘယ်သွားသွား ကင်မရာ ယူသွားပါတယ်။ ကင်မရာမပါရင် ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ရိုက်ပါတယ်။
၈) ဘယ်လိုနေရာမျိုးက ခင်ဗျားကို ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိသလဲ။
လမ်းနဲ့ လူတွေရှိတဲ့ နေရာတွေ။
၉) ကျေးဇူးပြုပြီး ခင်ဗျားသုံးတဲ့ technique လေးတွေ process လုပ်ပုံလေးတွေ သဘောတရားလောက်ပြောပြလို့ရမလားခင်ဗျ။
ကင်မရာထဲမှာ အဖြူအမည်းတစ်ခါတည်း setting ချပြီး ရိုက်တဲ့ပုံတွေဆိုရင် post process လုပ်တာ နည်းပါတယ်။ ကာလာနဲ့ ရိုက်ဖြစ်ရင် ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းနဲ့ရိုက်ဖြစ်ရင် VSCO ကို သုံးပြီး အဖြူအမည်း ပြောင်းရင်ပြောင်း၊ သို့မဟုတ် ကာလာ preset ပြောင်းသုံးတာမျိုး လုပ်ပါတယ်။ 4:3 အချိုးမကြိုက်လို့ 3:2 ပြောင်းဖို့ crop လုပ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။
၁၀) အခု ဒီမှာဖတ်နေတဲ့သူတွေအတွက် သူတို့ပုံလေးတွေ အကောင်းဆုံးအနေအထားရောက်အောင် အကြံဉာဏ်လေးပေးနိုင်မလားခင်ဗျ။
ပုံကောင်းတွေ များများကြည့်။ များများထွက်ရိုက်။
၁၁) ခင်ဗျားဘဝမှာ ဓါတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာ ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတာ ပြောပြလို့ရမလား။
ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ စာဖတ်၊ ဘာသာပြန်၊ ကဗျာရေး အဲတာတွေထဲက တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ ကြိုးစား။
၁၂) နောက်ပြီး ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးတွေအပြင် ကိုယ်ပိုင်ဆောင်းပါးတွေ ဘာတွေကော ရေးဖြစ်ဖို့ရှိလား။
Street နဲ့ ပတ်သက်တာတွေရေးဖို့ တေးထားတာရှိပါတယ်။ ဘာသာပြန်လည်း ဆက်လုပ်နေပါဦးမယ်။
၁၃) Myanmar Street Photographers နဲ့ Featured Collectives မှာ ခင်ဗျားရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးတွေက မြန်မာပြည်က Street Photographer တွေအတွက် အထိုက်အလျောက်ထက်ပိုတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးရှိခဲ့တာတော့အမှန်ပဲ။ အဲ့ဒီ့တော့ ခင်ဗျားရေးခဲ့တာနဲ့ သူတို့အခုရိုက်နေတာကြည့်ပြီး ခင်ဗျားအားရလား။ ခင်ဗျားဘက်က အမြင်ပေါ့။
MMSP နဲ့ FC ကြားမှာ street ရိုက်သူတွေ မျိုးဆက်၂ဆက် ရှိသွားပြီလို့ ကျနော်မြင်တယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကြောင့် ရိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ပိုပြီး အခွင့်အရေးတွေ ရလာတယ်။ Photo Essay တွေ ထွက်လာတာ သဘောကျတယ်။ FC ပြပွဲလုပ်နိုင်တာ၊ စာအုပ်ထွက်လာတာ အားရတယ်။ ရိုက်တဲ့သူတွေ နိုင်ငံတကာပွဲတွေကို ခုထက်ပိုပြီး ဝင်နိုင်လာစေချင်တယ်။
၁၄) ခင်ဗျားအနာဂတ်အတွက် ဘာတွေစီစဉ်ထားတာရှိလဲ။ ဘယ်လိုပရောဂျက်မျိုးတွေ လုပ်ချင်လဲ။
မြန်မာပြည်မှာ road trip ထွက်ပြီး ရိုက်ဖို့ကတော့ တေးထားတဲ့ ပရောဂျက်ပါပဲ။ မလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူး။
Yangon, Myanmar, 2017.
FC ကို ပုံတွေသိပ်မပို့ဖြစ်ပေမဲ့ ခုလိုမေးတဲ့ FC ကို ကျေးဇူးပါ။
သူ့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံလက်ရာတွေကိုကြည့်ချင်ရင်တော့ အောက်ကလင့်ကိုနှိပ်ပြီး သွားရောက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Thi Ha Thu on Featured Collectives